बिरालाहरु किन रुन्छ | पोस्टपोस्ट
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | 12/05/2022 11:41 | घरपालुवा जनावर
यदि हामी सबैलाई बिरालाहरूको बारेमा थाहा छ भने, यो हो कि तिनीहरूले फुर्काउँछन्, तर, बिरालाहरू किन रिसाउँछन्? धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूले यो सहज र खुसी हुँदा गर्छन्।
जे होस्, बिरालाहरूले पनि अन्य राज्यहरूलाई अन्य बिरालाहरूलाई साथै हामीलाई सञ्चार गर्न purring प्रयोग गर्छन्।
पशु कल्याण मा ठूलो प्रगति को कारण, जनावरहरूले कसरी आफ्ना भावनाहरू सञ्चार गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नमा समाज बढी केन्द्रित छ। वास्तवमा, बिरालाहरूले वैज्ञानिक समुदायको बीचमा ठूलो जिज्ञासा उत्पन्न गर्छन्। 10.000 भन्दा बढी वर्षदेखि तिनीहरू मानिसहरूसँग बस्दै आएका छन् र, हाल, यो संसारभरि सबैभन्दा लोकप्रिय घरपालुवा जनावरहरू मध्ये एक हो।
सबै मांसाहारीहरू मध्ये तिनीहरूसँग स्वरहरूको सबैभन्दा ठूलो भण्डार छ, यो तिनीहरूको सामाजिक संगठन, निशाचर गतिविधि र आमाको बच्चासँग भएको लामो सम्पर्कको कारण हुन सक्छ।
1 तिनीहरूले purr कसरी उत्पादन गर्छन्?
2 किन बिरालोहरु purr गर्छन्?
2.1 किन त्यहाँ बिरालोहरू छन् जुन पिउँदैनन्?
3 मेरो बिरालोले चिच्याउछ, र सिंहले कराउछ?
4 purring बाहेक अन्य आवाज
तिनीहरूले purr कसरी उत्पादन गर्छन्?
यो स्नायु आवेगहरू मार्फत उत्पादन गरिन्छ जुन स्वरयंत्रको मांसपेशीहरूमा कार्य गर्दछ र यसलाई प्रति सेकेन्ड 25 र 150 कम्पनहरू बीच कम्पन बनाउनुहोस्। त्यसोभए जब बिरालोले सास लिन्छ र हावा छोड्छ, ग्लोटिस खुल्छ र बन्द हुन्छ, र यसरी purr उत्पादन हुन्छ।
किन बिरालोहरु purr गर्छन्?
बिरालोका बच्चाहरू दुई दिनको जीवन पछि, सामान्यतया जब तिनीहरू दूध चुस्छन्। यो आमा संग संचार को मुख्य रूप हो। बिरालोले बच्चा जन्माउनु अघि पिउने गर्छ, र एक पटक तिनीहरू जन्मेपछि यो विश्वास गरिन्छ कि बिरालोले बिरालाको बच्चाहरूलाई उनीहरूको स्थानमा मार्गदर्शन गर्न सेवा गर्दछ। यो केहि हदसम्म पारस्परिक छ, किनकि बिरालाका बच्चाहरूले आमालाई तिनीहरू कस्तो छन् भनेर संकेत गर्दछ।
वयस्क बिरालाहरूको मामलामा, तिनीहरू एक्लै वा साथमा भए तापनि तिनीहरू खुसी हुँदा तिनीहरू प्राय: रिसाउँछन्। यदि तिनीहरू चिन्ताको स्थितिमा वा एक प्रमुख बिरालोको अगाडि छन् भने, तिनीहरूले यसलाई शान्त पार्न प्रयास गर्न प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूले ठूलो स्वरमा र अधिक तनावपूर्ण शरीरको मुद्रामा तनावलाई शान्त पार्न सक्छन्।
वास्तवमा, अध्ययन अनुसार, तिनीहरू पनि प्रयोग गर्छन् तपाईंको मागको जवाफ दिन मालिकलाई प्राप्त गर्न purr। यस विशिष्ट अवस्थामा, यो पत्ता लगाइएको छ कि purr सँगसँगै तिनीहरूले मानव बच्चाहरूको रोएको जस्तै आवृत्तिको साथ आवाज निकाल्छन्। यस तरिकाले, मानौं कि यसले मालिकको "मातृत्व वृत्ति" सक्रिय गर्दछ, जसले उसलाई के मागेको छ, ध्यान, खाना, खेल, इत्यादि दिएर प्रतिक्रिया दिन्छ।
अर्को उत्सुक तथ्य यो हो तिनीहरू निको पार्ने उद्देश्यका लागि purring प्रयोग गर्छन्। प्रति मिनेट 24 र 150 कम्पनहरू बीचको फ्रिक्वेन्सीहरूले लेखनमा मेकानिकल उत्तेजनाहरू सक्रिय पार्छ, यसले हड्डीको चयापचयलाई असर गर्छ, नयाँ हड्डी कोशिकाहरू उत्पन्न गर्दछ, जसले हड्डीको तन्तुलाई पुन: निर्माण र मर्मत गर्न निम्त्याउँछ। यो एक बरु विचित्र संयन्त्र हो, किनकि कुकुरहरूको मामलामा तिनीहरू हिँड्दा वा दौडँदा तिनीहरूले समान फाइदाहरू प्राप्त गर्छन्। यद्यपि, बिरालोहरूले यसलाई आफ्नो "आकस्मिक" जीवन शैलीमा अनुकूलित गरेका छन्।
purring को अर्को प्रयोग मांसपेशिहरु बलियो बनाउन र tendons मर्मत गर्न को लागी, साथै सास फेर्न सजिलो र दुखाइ वा सूजन कम गर्नुहोस्।
किन त्यहाँ बिरालोहरू छन् जुन पिउँदैनन्?
केही मालिकहरू डराउँछन् जब उनीहरूले देख्छन् कि उनीहरूको बिरालो पिउरिरहेको छैन र दिमागमा आउने पहिलो कुरा भनेको उनीहरूको बिरालो खुसी छैन। यससँग यसको कुनै सरोकार छैन, यो एक कारणले हो बिरालो सामाजिक कारक, त्यहाँ बिरालाहरू छन् जुन अरू भन्दा धेरै "बोल्ने" र फुर्सद छ। चाहे तिनीहरू अधिक मिलनसार र अरू धेरै अन्तर्मुखी भएकाले हो। त्यसकारण, तपाईलाई चिन्ता गर्नुपर्दैन कि यदि तपाईको बिरालोले धेरै थोरै गर्छ भने उसले पिउदैन। तर यदि उसले बारम्बार रुन्छ र त्यसो गर्न छोड्छ भने, उसलाई ध्यान दिन सजिलो हुन्छ।
मेरो बिरालोले चिच्याउछ, र सिंहले कराउछ?
सबै बिरालाहरू फुर्सद हुँदैनन्। बिरालाहरू, लिंक्स र कुगरहरू जस्ता साना बिरालाहरूको अवस्थामा, जिब्रोको आधारमा रहेको हाइइड हड्डी ओसीफाइड र कडा हुन्छ, त्यसैले जब स्वरयंत्र कम्पन हुन्छ यसले तिनीहरूलाई पिउने अनुमति दिन्छ। अर्कोतर्फ, सिंह, बाघ र चितुवा जस्ता ठूला बिरालाहरूमा, हाइइड हड्डी पूर्ण रूपमा ओसीफाइड हुँदैन र लोचदार लिगामेन्टद्वारा खोपडीमा जोडिएको हुन्छ। तसर्थ, तिनीहरूले कराउन सक्दैनन् तर तिनीहरू गर्जन सक्छन्, जुन हाम्रो सानो बिरालोले सक्दैन।
purring बाहेक अन्य आवाज
निस्सन्देह, बिरालाहरूको पिउरिङले हामीलाई तिनीहरूको बारेमा सबैभन्दा मनमोहक बनाउँछ त्यहाँ अन्य आवाजहरू छन्, र हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि तिनीहरूले व्यक्त गर्छन् भनेर कसरी पहिचान गर्ने, जस्तै:
म्याउ। यो एक सेकेन्डको अंशबाट केही सेकेन्डसम्म चल्ने आवाज हो र बिरालोले बिस्तारै आफ्नो मुख खोलेर र बन्द गरेर आवाज निकाल्छ। केहि अवस्थामा, एक म्याउ अर्को आवाज संग हुन सक्छ। यसको बन्द अर्थ छैन। साधारणतया, यो एक तरिका हो जसमा बिरालोले व्यक्तिको ध्यान खिच्नको लागि प्रबन्ध गर्दछ, ताकि तिनीहरूले वातावरणमा केही अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले ढोका खोल्नको लागि म्याउ गर्दै, उसलाई खुवाउनुहोस्।
मद्दतको लागि कल गर्नुहोस्। यो आवाज सामान्यतया कुकुरबाट आउँछ। कि त उनीहरू एक्लै छोडिएका छन् वा कतै फसेका छन् वा आमाको मुनि, आमा एक हुन् जसले तिनीहरूलाई कसरी राम्रोसँग व्याख्या गर्न जान्दछन्।
वारबल वा चीरप। यो एक म्याउ र गुर्राको बीचमा एक आवाज हो, पिचमा वृद्धि र एक सेकेन्ड भन्दा कमको अवधि द्वारा विशेषता। बिरालाहरूले मुख नखोलिकन यसो गर्छन्। यो प्रायः आमा र बिरालाको बच्चा बीचको संचारको भाग हो, र वयस्क बिरालोहरू द्वारा अन्य बिरालाहरू वा मानिसहरूलाई मैत्री अभिवादन पठाउन प्रयोग गरिन्छ।
यौन कलहरू। भाले र पोथी बिरालाहरू दुवै गर्मीमा हुँदा जोडीलाई आकर्षित गर्न तीव्र र लगातार चिच्याउने गर्छन्। पुरुषहरूले पनि यसलाई क्षेत्र चिन्ह लगाउन प्रयोग गर्छन्। धेरै मालिकहरूले यी प्रासंगिक "म्याउहरू" को कारणले गर्दा उनीहरूको बिरालाहरूलाई ठीकसँग न्युटर गर्ने निर्णय गर्छन्।
नुहाउने र थुक्ने। बिरालोले आफूलाई जोगाउन खोजेको र धम्कीले आफ्नो मुख चौडा खोल्न सक्छ र हावालाई तीव्र रूपमा बाहिर निकाल्न सक्छ। नतिजा भनेको एक सेकेन्डको लागि हिसाउने आवाज हो, जसलाई स्नोर्ट भनिन्छ। तीन हप्ता भन्दा कम उमेरका बिरालाहरू पहिले नै थाहा छ यो कसरी गर्ने। जब हावा डिस्चार्ज समयको एक सानो अंश मात्र रहन्छ, उत्पादित ध्वनि एक छोटो थुक वा स्नर्ट हो।
चिच्याए र चिच्याए । तिनीहरू धम्कीपूर्ण आवाजहरू बनाउँछन्, जस्तो देखिने अनन्त म्याउहरू। तिनीहरू तीव्र र शोरको विशेषता हुन्। यो बलियो खतरा बिरालोहरु बीच प्रत्यक्ष झगडा रोक्न मद्दत गर्छ।
छोटो गर्जन। यो एक सेकेन्ड को एक अंश देखि केहि सेकेन्ड सम्म रहन्छ कि एक कम, खतरनाक आवाज थियो।
पीडाको चिच्याउने वा चिच्याउने । यो आवाज सामान्यतया एक बिरालो द्वारा बनाईएको छ जब यो चोट लागेको छ, यो धेरै तेज र अचानक छ, मानौं यो एक रम्बल थियो। रोएरले पनि समागमको अन्त्यको संकेत गर्दछ।
क्याकल। यो वर्णन गर्न गाह्रो आवाज हो, तर एकचोटि तपाईंले यसलाई सुन्नुभयो, यसलाई बिर्सन असम्भव छ। यो बिरालोले आफ्नो बङ्गारा काँप्दा निकाल्ने उच्च-पिच आवाजहरूको श्रृंखला हो। एउटा सामान्य अवस्था जसमा बिरालोले यो आवाज निकाल्छ जब उसले आफ्नो शिकारलाई बाटोमा अवरोध गरेर हेरिरहेको हुन्छ। तीव्र उत्तेजनाको अवस्था व्यक्त गर्दछ र यसलाई प्राप्त गर्न असक्षमताबाट निराश हुन सक्छ।
संक्षेपमा, यो भन्न सकिन्छ कि purr बरु एक उच्च, नकारात्मक वा सकारात्मक भावनात्मक अवस्था संग पहिचान गरिएको छ, अस्पष्ट, स्थिति मा निर्भर गर्दछ। मलाई आशा छ कि यो लेख तपाईलाई उपयोगी भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » घरपालुवा जनावर » किन बिरालोहरु purr गर्छन्
आफैलाई कसरी क्षमा गर्ने